८ बैशाख - ४ वर्षअघिसम्म चीनमा नेपाली हस्तकलाको ठूलो माग थियो। राष्ट्रपति सी चिनफिङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाई गर्न थाले। महँगा महँगा थाङ्का उपहार लिने–दिने प्रवृत्तिमा ह्रास आयो।
२९ चैत - सो दिनसम्म सरकारी एवं स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरुले पनि बारा र पर्साको त्यो विध्वंसात्मक आँधी के हो? भन्न सकेका थिएनन्।
२३ चैत - पोखरामा अलिअलि देखिएको बादल ठूलो भएर अगाडि बढ्यो। चितवन हुँदै बारा–पर्सा पुग्दा त्यो बादल विनाशकारी टोर्नेडोका रुपमा विकास भयो।
८ चैत - म कुनै दिन मन्त्री भैफालेकोले केही मान्छेहरुलाई हैरान छ, ‘यो जन्तुले पनि काम गर्दोरहेछ’ भनेर! हाइ मेरो देश मन्त्रीले काम गर्न नहुने रे!!
७ चैत - पत्रकारिता तेस्रो सेमेस्टर अन्तिम परीक्षा आइरहेकाले भर्खरै बिग्रिएको मोबाइलको डिस्प्ले बनाउन मन लागेन।
२ चैत - यस वाक्यमा लुकेको अभिमान र घमण्ड त हेर्नुहोस्, ‘चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सक्छौं।’
२४ फागुन - श्राद्ध गर्दा बाबुतिरका तीन पुस्तालाई मात्र तर्पण दिइन्छ। पिता, हजुरबुबा र बूढाबाजे मात्र ‘त्रिपन्ताम्’ का भागिदार हुन्छन्। तर, मातृ पुस्तातिर भने तर्पण पाउने चार पुस्ता हुन्छ। यो मातृसत्तात्मक समाजको चित्रण पनि हो।
२९ माघ - २०७२ असोज अन्तिम साता प्रचण्डको समर्थनमा ओलीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनाइँदै गर्दा ओली-प्रचण्डबीचको सम्बन्ध २०७३ जेठ-असारमा जसरी बिग्रला बिग्रेला र ओलीले त्यति चाँडो सत्ता छाड्नु पर्ला भन्ने कसले सोचेको थियो र?
२१ माघ - हालै चीनको हुनान प्रान्तबाट गएका कलाकारहरूले नेपालको राजधानी काठमाडौंस्थित एउटा स्कूलमा सिंह नाच देखाए। चिनियाँ नयाँ वर्ष (वसन्त चाड) को रौनकले छुने बित्तिकै चिनियाँ कलाकारहरू चलायमान हुन्छन् र विश्वव्यापी रूपमा सिंह वा ड्रागन नाचको दौर शुरू हुन्छ।
१७ माघ - डा. केसीको मृत्युका बारेमा प्रम ओलीले कुनै ज्यान मुद्दा बेहोर्नु पर्दैन। तर, त्यो घडी प्रम ओलीका लागि सुखद हुने छैन। गाउँघरका हाट बजारमा बौलाहा मजनूँहरूलाई स–साना केटाकेटी बच्चाहरूले गिज्याउँदै लखेट्ने गरे झैँ प्रम ओली आम जनताको च्याँग्रा लखे्ट्याईमा पर्नु हुनेछ।
९ माघ - चीन अहिले च्वाँचे अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ अर्थात् समृद्ध र पुष्ट। कृषिप्रधान मुलुक भएकाले नेपालले सुँगुर वर्षबाटै चीनसँग सुँगुरको व्यवसायका माध्यमबाट आफ्नो निर्यात व्यापारमा छलाङ मार्ने र चीनसँगको घाटा नियन्त्रण गर्ने उपाय पहिल्याउन सक्छ।
२८ पुस - शिक्षकले अरू धेरै कुरा नजाने पनि आफूले पढाउने विषयमा, आफूले खाने जागिरका बारेमा जानकार हुनु जरूरी हुन्छ। यसका लागि शिक्षक आफैं स्रोतपूर्ण हुनुपर्छ। शिक्षकलाई स्रोतपूर्ण बनाउने साधन हुन् पुस्तक।
२० पुस - ‘ऐतिहासिक तथा यथार्थ दृष्टिकोणबाट चीनलाई हेर्नुपर्छ। चीनको स्पष्ट विशेषता भनेको सुधार तथा खुलापन हो। यो वर्तमानकालमा चीनको भाग्य निर्माणको प्रमुख सूत्र हो।’
३ पुस - डा जोगिन्दर झासँग मिलेर तुलसी काकाले बालाजुमा पहिलोपटक एसी जडित रेस्टुराँ खोल्नु भएको थियो। तर पछि त्यो बन्द भयो।
४ मंसिर - नेता तङ स्याउफिङले खुलापन प्रारम्भ गरेको एक वर्ष नबित्दै अर्थात् १९७९ मा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले चिनोस्वरूप दिएको मयुरको काष्ठकलात्मक एउटा झ्याल बेइजिङस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा प्रदर्शनी राखिएको छ।
२१ कार्तिक - विदेशमा स्वदेशको नाम चम्काउने, पदक विजेता कुनै खेलाडीले कस्तो महसुस गर्छ? ग्रेटवालमा रञ्जना लिपि देख्दा मजस्तो एक नेपालीका मनमा कस्तो भावना छचल्कियो? भनिरहनु पर्ला र?
१७ कार्तिक - कसरी भन्ने तीज सकिएर भाइटीका आइसक्यो तर, अझै मेरी बहिनीले न्याय पाएकी छैने भनेर। आमाको आँखा रसाउन छाडेको छैन भनेर। देशको माटो निर्मलाहरुको रगतले लतपत्तिएको छ भनेर।
१६ कार्तिक - मलाई थाहा भएसम्म करिब ९५ प्रतिशत बलात्कारका घटनामा राजनीतिक संरक्षण छ। त्यसैले बलात्कारविरोधी अभियान राजनीतिक रुपमा दबाउने प्रयास भएको महसुस गरेकी छु।
हेलिकाेप्टर बिग्रिँदा ओलीमा देखिएकाे त्यो आत्मबल
१३ कार्तिक - एक जना अधिकारी नजिक गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाए– यहाँबाट करिब डेढ किलोमिटर उकालो–ओरालो गरेपछि हेलिकोप्टर आउने ठाउँमा पुगिन्छ। सूचना दिने अधिकारी त्रसित मुद्रामा थिए। तर ओली उत्साही देखिए र, श्रीमती राधिकातर्फ संकेत गर्दै भने– म त पहाडमा हिँडेको मान्छे, बरु उनलाई गाह्रो होला।
८ कार्तिक - स्थायी शिक्षक भएर अर्को स्कुलमा आएको एकबर्षभित्रै मेरो विवाह भयो, आफ्नै रोजाइको केटासँग। उनी ब्रिटिश सैनिकमा भएकाले बेलायतमै कार्यरत थिए। विवाह भएपछि पनि खुरुखुरु पढाउन स्कुल जाँदै थिएँ। तर मेरोबारे धेरै ‘गसीप’ बन्न थालेछन्।
३ कार्तिक - २०६१ साल पुसको पहिलो दिन, दार्जीलिङमा चिसो बिहानीले हामीलाई न्यानो स्वागत गरिरहेको थियो।
२४ असोज - रियाकी साथीले जवाफ दिइन, ‘रियाको विवाह भएको थिएन तर उनी गर्भवती भएकी रहिछन्। केटा साथीले धोका दिएर विदेश गएपछि उनले आत्महत्या गरेकी रहिछन्।’
२३ असोज - पूरै बडीगार्ड सहित होलान भन्ठानेका शाह एक्लै लखर लखर हिंडिरहेका भेटिए। त्यसैले उनलाई विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह यिनै हुन भनेर पत्याउन नै गाह्रो परिरहेको थियो।
१६ असोज - ‘खेल मेरो जीवनको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो र ६४ वर्षको उमेरमा पनि उही उत्साहका साथ खेल्दैछु, फुटबल टिम गेम हो, टेनिस इण्डिभिजुअल, टेनिस विभिन्न उमेर समूहमा खेल्न पाइन्छ, प्रौढ अवस्थामा पुग्दा यस्तो गेम रोजियो।’
९ असोज - लामो समयसम्म पनि अवसर नआउँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि बेइजिङसम्मको यात्रा झन् झन् मृगतृष्णा बन्ने देखिन्छ। चीनको प्रशासनिक केन्द्र नपुगेपनि कतिपयले विशाल चीनका भूभागहरू टेकेर प्यास मेटेको हुनुपर्छ।
४ असोज - अरु कुरामा बंगलादेश हामी (नेपाल) भन्दा अघि रहेपनि ट्राफिक नियम उल्लंघन नगर्नेमा चाहिँ हामीले बंगलादेशलाई जितेका रहेछौँ।
१ असोज -
३१ भदौ - डाक्टरले मलाई ‘नन हजकिन लिम्फोमा’ भएको बताए। यो एक प्रकारको रक्त क्यान्सर थियो। यो सुनेर मेरो अवस्था नाजुक बन्यो। दिमागले केही सोच्न सकिरहेको थिएन। जब मलाई मेरो जीवन अब सामान्य बन्दैन भन्ने महसुस भयो तब मैले मेरो डायरी लेखे।
३० भदौ - ‘मान्छेहरुले के सोच्छन् भने, नेपालमा मेडिकल कलेज थोरै भएर विद्यार्थीहरु देश बाहिर गईरहेका छन्,’ उनले थपिन्, ‘नेपालमा पैसा तिर्न नसक्ने भएपछि यता (ढाका) आउनुपरेको हो। त्यसैले, कलेजको संख्या बढाउनुभन्दा भएका कलेजहरुमा सुधार ल्याउनुपर्‍यो भन्ने डा. केसीको माग एकदमै जायज छ।’
१४ भदौ - म जान्न चाहन्थेँ, धेरै खुलस्त हुँदा परेको अप्ठेरोका कारण उनले आफै राजिनामा दिएका हुन् वा उमेर वा सेवा अवधिका कारण स्वत अवकास पाएका हुन्!